Safiirka DKMG Ah ee Somalia Usoo Magcayday Dalka India oo Soogaarey Magaalada Hydebad Halkaasi oo Ay Kusoo Dhoweeyen 13 Ruux oo Ay Isku Haybi Hoose Yihiin
Waxa markii ay taariishu 26/12/07 december Ku beegnaydi waxa magaalada hyderabad ee dalka India soogaarey Safiirada Dkmg ah ee somalia Usoo magcaowaday Dalka india oo ay halkaasi Kusoo dhoweeyeen koox ay isku haybi yihiin.
Mrs. Ebyan Ladane Saalax oo lasheeegay in ay ku Magcaaban tahay safiirka dalka india uqaabilsan Dowlada Kmg ah ee somalia ayaa waxa dalka India Kusoo dhoweeyey koox dhalinyaro ah oo ay Isku Haybi dhow yihiin iyadoo aaney jirin wax Soo dhoweyni ah oo ay ka heshay shacabka Somaliyeed Ee kudhaqan dalka india gaar ahaan Magaalad Hayderebad oo ay ugu yaraan ku Dhaqanyihiin Shacab somaliyeed oo gaara inta Lahubo have million oo shacab somaliyeed ah Oo halkaasi kudhaqan .
Arintan ayaa timi kadib markii ay soo Dhoweynita gabadhan ku magcaaban safiirada dalka India uqaabilsan arimaha somalia koox ay isku Haybi yihiin ay ku hashiin waayeen shacabka Somaliyeed ee halkaasi ku dhaqan isla markaasna Ay sheegayeen in gabadhani tahay gabar iyaga Ah oo ay iyagu soo dhoweysanayaan cidlena aan Waxba kagelin.
Somalia mudane Sheikh Aadan Madoobe.
Ardayda somaliyeed ee dalka india ku dhaqan ayaa Haatan ka hor sugaayey safiirka dalka india Loosoo magcaabay isla markaana ay ka go naydi In ay soo dhoweeyeen oo kulamo xaasaasi ah Layeeshaan una sooban dhigaan Dhibaatoyinka Kadhanka ah ee dalka india ay Katabanayaan Ardaydu.
Intaas kabacdi ayaa wax dhacay in xaaladii Safiirada ee indhaha lagu wada hayey ay dhanka Kale isku rogtey oo ay noqotay qof hal reer Soobooqatay iyo wixii lamid ah arintan ayaa ah Mid layaan ku noqotay dhamaan shacabka Somaliyeed ee ku dhaqan dalka india gaar ahan Magaalada hyderabad.
Ardayda somaliyeed ee udhaqan magaalada Hayderabad ayaa sheegay in aaney waxba kajiran Wax baahinta daamacday in ardayda somaliyeed ee Ku dhaqan dalka india aaney soo dhoweyni Safiirada dhowaan dowlad Kmg ah ee somalia Kajira ay soo magcowday.
Mar aanu xiriir Xaasaasi ah layeelanay arday Si aanu wax uga ogaano xaalada ardayda kusugan Magaalda heyd ee dalka india arday badan oo Cod saday in aan magocooda lashaacin ayaa Shaaca kaqaaday in ay beentahay in ardayda Somaliyeed ee dalka india wax ku barata aaney Wax kulan ah layeelan safiirka lasheegaayo Baydheheen.
Ardayda oo wejigooda caro kamuuqaneysey ayaa Sheegay in warbaahinta soo daabacday ardayda Somaliyeed oo soo dhoweysey safiirka dalka india In ay been iyo madax goosasho tahay waana in ay Kawaan toobaan bay dhaheen beenta oo wixii Xaqiiqo ah qoraan hadii kalena ay iska dhafaan.
Ardayda ayaa intaas si kulul uraaciyey in Gabadhan safiirada ah ay soo dhoweeyeen 13 wiil OO ay isku haybi hoose yihiin isla markaana ay Qalad tahay in magaca ardayda somaliyeed la istic Maalo waa sida ay hadalka udhigeene ardayda ayaa Mar kale ku celiyey in ay warbaahinta soo qoratay Waxaas ay ku qaldameen ardayda oo warar been Abuur Ah ay kasheegeen isla markaana ay Xaquuqada bini Aadan tinimada wax weyni udhimeen Ardayda ayaa Yiri Cidii danayneysa in ay hubsadaan waa in ay Ka eegaan warnaahinta soo Daabacday oo ay ku arki Karto in ay 13 wiil oo Keliya yihiin isla Markaan aan la oran karin Ardayda soomaaliyeed ee Dalka india wax ka barata Aradayda ayaa yiri waa in ay raali gelin Kabixiyaan warbaahinta qoray ardayda somaliyeed Oo ah been iyo madax goosasho aan geed looga Soolaaban
UGu damaynitii aradayda ayaa warbaahinta oodhan Iyo shacabka somaiyeedba oo safiirkan loosoo Magcaabay ugu baaqay in safiirkani aanu ahayni Mid shuruucdii sariirnimo ee looga baahnaa Maray iyo sharciayda calamiga ah ee dowladaha Caalemku kudhaqmaan waxayna ardaydu intaas ku Dareen in arin qabyaalad iyo kala furfurid uu Safiirkani soo kordhiyey oo keliya islamarkaana Aanu nafsidaas ah lahayni oo uu yahay qof Reer Kiisa safiir u ah.Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxiixan